३ दिनका लागि ४ जनालाई एलन मस्कको कम्पनीले पठायो अन्तरिक्ष भ्रमणमा – Sunaulo Nepal TV
तीन दिन अन्तरिक्ष भ्रमणपछि उनीहरू फ्लोरिडाको तटीय क्षेत्रमा अवतरण हुने बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार पृथ्वीको सतहबाट ५ सय ७५ किलोमिटर माथि अन्तरिक्षमा चार जना यात्रु रहेको क्याप्सुल रहेको छ ।
२७ हजार ३ सय ६० किलोमिटर प्रति घण्टाका दरले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने यो क्याप्सुलले प्रत्येक ९० मिनेटमा पृथ्वीको परिक्रमा गरिसक्ने छ । अन्तरिक्ष स्पेस केन्द्र यो भन्दा तल नै रहेको छ । एपोलोको चन्द्र मिसनपछि यो उचाइमा पुग्ने पहिलो नागरिकहरू यी चारै जना बनेका छन् ।३८ वर्षीय अमेरिकी अरबपति जारेद आइज्याकम्यानले यो अन्तरिक्ष भ्रमणको चार्टर गरेका हुन् । ३८ वर्षीय अरबपति आइज्याकम्यानले यो भ्रमणका लागि कति पैसा तिरे भन्ने खुलाइएको छैन ।
तर करोडौँ अमेरिकी डलर तिरेको अनुमान गरिएको छ । स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्कले अन्तरिक्ष भ्रमणलाई नयाँ व्यापारका रूपमा विकास गर्न खोजेका छन् । अहिले भर्जिन ग्यालेक्टिक, ब्लु ओरिजनजस्ता अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनीहरूले पनि यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । एलन मस्कले भने अन्तरिक्ष भ्रमणका क्षेत्रमा प्रारम्भिक सफलता हात परेको मान्न सकिन्छ ।
Previous त्यो मध्यरात १ बजे ओलीलाई के भनेर बिदा भएका थिए सोम पाण्डे ?
Next बाहिरियो पुरै भिडियो : पानीले उनको पुरै खुटा भिजि सकेको रहेछ ! सेती नदीमा जानु आघि दुई साथीहरुलाई यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन् ! (भिडियो)